Harena an-kibon’ny tany : maro ny olana tsy voavaha | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany : maro ny olana tsy voavaha
Vovonana hikaonan-dohan’ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena, ny Antenimieran’ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara (CMM). Maro anefa, eto amintsika ny olana tsy voavaha ary tsy hita ny vokatra tena azo tsapain-tanana.
Efa maherin’ny enin-taona ny niorenan’ny Antenimieran’ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara. Vovonana natao hikaonan-dohan’ireo mpisehatra voakasika mba hitondra fivoarana sy firoboroboana eto amin’ny firenena, indrindra ny fanjakana, ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpandraharaha. Anjarany koa ny miantoka ny fanarahan-dalàna sy fanaraham-penitry ny asa mifanaraka amin’ny zava-misy iraisam-pirenena.
Maro anefa ny olana mitranga etsy sy eroa amin’ny lafiny harena an-kibon’ny tany. Ny tena fahita, ny fakana ny tanin’ny mponina, efa nohajariny hatrany amin’ny razambeny, saingy tsy misy ny taratasim-panjakana satria tsy misy ny hoenti-manana vokatry ny fahantrana. Tsy misy rahateo ny paikady tena mahomby avy amin’ny fanjakana, hanamorana ny fahazoana ny tany. Manana taratasy ara-dalàna avy any amin’ny fanjakana anefa, matetika, ireo mpitrandraka ny harena ambanin’ny tany.
Maro ny gaboraraka
Miezaka maneho hevitra manome vahaolana ny fiarahamonim-pirenena, toy ny Collectif tany, ny Sehatra iombonana ho an’ny fananan-tany (Sif), saingy tsy raisin’ny fitondrana. Vao mainka aza ampidirina am-ponja ny mpikambana ao anatin’izy ireny, toa an-dRaleva, mpikambana ao anatin’ny fikambanana eo ambany fiahin’ny Craad-OI, gadraina roa an-taona, sazy mihantona.
Eo koa ny firohotry ny olona rehefa misy toerana ahitana harena an-kibon’ny tany toy ny any Didy, Betsiaka, … . Maro ny faritra arovana, saingy tsy manana vahaolana mahomby ny CMM sy ny fanjakana, hany ka sahirana ireo fikambanana tsy miankina miaro ny tontolo iainana, satria ailika any amin’ireto farany ny andraikitra.
Manampy ireo voatanisa ireo ny fanararaotan’ny mpandraharaha tsy miankina, amin’ny fahazoan-dalana. Mitrandraka sahady izy ireny na mbola fikarohana aza ny alalana ananany. Raha fintinina, maro ny gaboraraka amin’ny lafiny harena an-kibon’ny tany sy ny fananan-tany eto amintsika.